चुरोट पिउनु भन्दा धूप बाल्नु बढी खतरा ! | NepalDut
घरको पूजाकोठामा हेरौं, मठ-मन्दिरमा पुगौं, मुठाका मुठा धुप बालेको देखिन्छ । के धुप बालेर भगवान प्रशन्न होलान् ? वा यसको अरु कुनै फाइदा होला ? खासमा धुप बाल्नु फाइदाजनक छ । यद्यपि अहिले हामीले जुन धूप प्रयोग गर्छौं, अर्थात तयारी धुप त्यो चाहि फाइदाजनक छैन ।
फाइदाजनक मात्र नभएको होइन, हानिकारक नै छ । भनिन्छ, चुरोटको सर्को तान्नुभन्दा तयारी अवस्थाका सुगन्धित धूप बाल्नु बढी घातक छ । यसले खासगरी फोक्सो अर्थात श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या निम्त्याउँछ ।
खासमा धुप बाल्नुको अर्थ र महत्व छ । यद्यपी त्यस्तो धुप बनस्पतिको पात तथा बोक्राबाट तयार भएको हुनुपर्छ । उच्च लेकाली भेगमा कोणधारी बनस्पति धुपीलगायत कतिपय वनस्पति हुन्छन्, जसको प्राकृतिक सुगन्ध हुन्छ । औ
षधिय गुण पनि । यस्ता वनस्पतिका पातलाई आगोमा बाल्ने गरिन्छ । यसबाट आउने धुँवाले पर्यावरण र स्वास्थ्य दुबैमा फाइदा गर्छ भनिन्छ ।